Sajhasawal.com.np | Homeगम्भीरताका साथ सरकारी निर्देशन नमान्दा इटलीमा जे भयो, नेपालमा त्यस्तै हुन सक्छ !
नेपाल ग्यास उद्योगले बुधबारदेखि ६ स्थानबाट सिलिण्डर वितरण तयारी
मन्दिरमा बत्ती बाल्ने क्रममा दियोबाट सल्केको आगोमा जलेर एक महिलाको मृत्यु
स्टाफ नर्सलाई डेराबाट निकाल्ने वडा सचिव पक्राउ
कोभिड–१९ को विरुद्ध सामूहिक प्रयासको खाँचो : मुख्यमन्त्री पौडेल
२५ लाखको निशुल्क बिमा गरिदिने सरकारको घोषणा
गम्भीरताका साथ सरकारी निर्देशन नमान्दा इटलीमा जे भयो, नेपालमा त्यस्तै हुन सक्छ !
एक नारायण पौडेल |
चिनको बुहानबाट फैलिएको कोरोना भाईरस (COVID -19) को महामारी झन्डै बिश्वका १६८ देशमा फैलिसकेको छ । हालसम्म ३,५३, ३२० मा यो सक्रमण देखिएको छ भने १५, ४०८ को मृत्यु भएको छ । त्यस्तै गरि १,००, ६०५ जना निको भएका छन भने हाल मध्यम अबस्थामा २, २६, ००९ छन भने ११२९८ जटिल अबस्थामा उपचाररत छन । यो सक्रमणले महामारीको रुप लिदै बिश्वका अति विकसित रास्ट्रहरुको समेत निद हराम गरिसकेको छ । अमेरिका, बेलायत, स्पेन, इटाली, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता बिकशित देशहरु समेतको टाउको दुखाई भएको अबस्थामा हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख देश नेपालमा समेत यसको सक्रमण देखिन थालेको छ ।
चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी १९ बर्षिय नेपाली विद्यार्थीमा सक्रमण देखिएको पुष्टि भईसकेको छ । यो पुष्टिसङ्गै सरकारले पनि नागरिक चहलपहल कम गर्न र जोखिम न्यूनीकरणको लागि केही कदमहरु लिएको छ । जस अन्तर्गत महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा क्वारेन्टाइनका लागि राखिएका साढे पाँच सयमध्ये आधाजति जबर्जस्ति पर्खाल नाघेर बहादुरी देखाएछन् । यस्ता अनुशाशनहिन हर्कत भईरहेको अवस्थामा देशमा कुन मानवीय हिसावले नाकामा अझै सदासयता देखाउने ?
१५-२० दिन अगाडि इटालिको अवस्था पनि झन्डै आजको नेपालको जस्तै थियो । सरकारले शुरूवातमा अलि सामान्य ढङ्गले लिएपनी केही समयपछि उसले आफ्ना नागरिकलाई अनावश्यक बाहिर ननिस्कन भनेको थियो । अनावश्यक सपिङ्ग मल, रेस्टुरेन्ट र भिडभाड नगर्न भनेको थियो । तर झन्डै हामी जस्तै उदण्ड, अनुशासनहिन र घमण्डी भएर हेलचक्राई र गम्भीरताका साथ सरकारी निर्देशन नमान्दा आज इटलीको के अबस्था हुदैछ ? बिश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बोकेर पनि अनुशासन र प्रद्दतीलाई आत्मसात गरेर चीनले आज लगभग नियन्त्रण शुन्यमा झार्दैछ । संक्रमण एकबाट दुई र दुईबाट ३ हुने हो । यदि लापरबाही र हेलचक्राई गर्दै जाने हो भने एक जनामा देखिएको संक्रमण अन्यमा फैलन धेरै समय लाग्दैन । त्यसैपनि साधन, स्रोत, प्रबिधि र जनशक्तिको हिसाबले हामी अत्यन्त पछाडि छौं भने भौगोलिक, सडक र सूचना पहुँचको हकमा अझै पनि कमजोर छौं ।
तसर्थ सरकारलाई मात्रै धारे हात र आलोचना गरेर हामी आफू चाहिँ गम्भीर नहुने, लापरबाही, हेलचेक्राई र मजाक गरिरहने हो भने पक्कै पनि हामीलाई न त पशुपतिनाथले बचाउन सक्नेछन् न त बुद्धले नै । न त सगरमाथाले नै छेक्नेछ । सरकारले हवाई उडान, सवारी साधन, मेला, महोत्सव, विभिन्न खेलकुद, जिम-खाना, चलचित्र हल, उत्तरी र दक्षिणी नाकाहरु बन्द गरेर सकारात्मक थालनी गरेको छ । तसर्थ अब हामी आम नागरिक सचेत, गम्भीर र साबधानी हुन सकेनौ वा चाहेनौ भने यसले निकट भबिस्यमा नै स्थिति काबु बाहिर नजाला भन्न सकिन्न । हामीलाई हाम्रै हेलचेक्राई र लापरबाहीले पश्चाताप गर्ने समय पनि दिनेछैन । तसर्थ नियमित साबुन-पानीले हात सफा गरौं । सम्भब भएसम्म मास्क र पन्जाको प्रयोग गरौ। भिटामीन सि युक्त खानेकुराहरु जस्तै टमाटर, खुर्सानी, सिम्ला, कागती, सुन्तला, किवि, काउली, ब्रोकाउली, इत्यादिको सेवन गरौं ।
समयको संबेदनसिलतालाई नबुझेर, बुझ्नै नचाहेर वा बुझेर पनि गम्भीर हुन नसकेर यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि गाउँ घर तथा शहरमा तामझामका साथ विवाह, ब्रतबन्ध, बर्थडे, इङेजमेन्ट , न्वारन पास्नी, छेका जस्ता कार्यक्रम राख्दै अझैपनी लापरबाही गर्दैछन् भने सचेत गराउँ । यदि सचेत गराउदा गराउदै कोहि अटेरी गर्छ भने सामाजिक बहिस्कार गरौँ । गाउँमा रहनुहुने युवा दस्ता, विद्यार्थी र स्थानीय प्रतिनिधिले जोखिम रहित सामाजिक अभियान चलाउँ । शिक्षकहरुले पनि यो समयमा उल्लेखनीय भुमिका निर्बाह गरिदिनुहोला । जसले गर्दा समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकोस ।
- भरतपुर महानगरपालिका
वाड न १३ चितवन
हाल - साउदी
'लकडाउन'को समय एकान्तवासमा शाकाहारी भोजन उत्तम
'घरभित्रै बसौं, जीवन सुरक्षित बनाऔं'
'बिपदमा युट्युबे आतङ्क' - क्यामेरा घाटीमा झुण्ड्याउदैमा सन्चारकर्मी भइन्छ ?